WinToFlash [Bootable USB dala isiqulathi-zifayili] Kuthenga i-iphepha-mvume iqhosha
Imisebenzi engundoqo ingaba 100% free.
Kuthenga ngakumbi iimpawu kuba Elinolwazi okanye Ishishini sebenzisa
Uyakwazi allays yandisa uze usebenzise WinToFlash Lite for free. Ke limited kwi-imisebenzi, kodwa unako ukusombulula zonke ekhaya umsebenzisi iingxaki njenge-Windows reinstallation. Ukuba ufuna OKO elinolwazi kwaye kufuneka ezongezelelweyo iimpawu - kuthenga i-yephepha-mvume.
Eli phepha ibonelela wena kunye elifutshane inkcazelo WinToFlash iintlelo kwaye lidwelisa amakhonkco kuba yokuthenga. Unyuso-phinda amaphepha kuba oluneenkcukacha uthelekiso bonke WinToFlash imisebenzi.
Kuthenga WinToFlash Ekhaya
Kunjalo, WinToFlash Lite ifumaneka simahla. Kodwa ukuba WinToFlash waba kuluncedo kuba wena okanye ufuna nje ufuna inkxaso nophuhliso - kuthenga Isifundo Sobuqu. Ke kufana a umnikelo kodwa bhetele!
Oku sephepha-mvume ngu kuba omnye umntu omnye simultaneous ufakelo kwi-kanye-PC.
Kuthenga WinToFlash Ekhaya kuba $5.77 okanye funda ngakumbi kwi-phinda
Kuthenga WinToFlash Elinolwazi
Oku sephepha-mvume le imisebenzi kuba elinolwazi abasebenzisi: inkqubo administrators, ababhekisi phambili kunye nezinye KE iingcali.
Oku sephepha-mvume ngu kuba omnye umntu 5 simultaneous installations on ezahluka-PCs.
Kuthenga WinToFlash Elinolwazi kuba $29.95 okanye funda ngakumbi kwi-phinda
Kuthenga WinToFlash Ushishino
Ukuba ufuna ukusebenzisa WinToFlash kuba ishishini kuthenga i-iphepha-mvume kuba Ishishini Edition.
Oku sephepha-mvume ngu 5 kuba abantu unlimited installations on ezahluka-PCs kwi inkampani yakho.
Kuthenga WinToFlash Ishishini kuba $100 okanye funda ngakumbi kwi-phinda
Siza kukuthumela sephepha-mvume ifayili kwi-e-mail: instantly emva intlawulo ekusetyenzwe. Le fayili njenge "WinToFlash 521447.nkey.txt" iqhotyoshelwe kwi-imeyili. Kananjalo siza kuthumela ezisisiseko ifayili yephepha-mvume ufakelo umyalelo nenkxaso nabo ulwazi. Funda oluneenkcukacha imiyalelo malunga WinToFlash indawo kwi-phinda.
Nceda qinisekisa ukuba uyakwazi ukufumana i-imeyili evela support@novicorp.com. Phambi kuthenga nceda fakela le i-imeyili yakho mhlophe uluhlu.
Ukuba ufuna ayifumananga yephepha-mvume ifayili kwi yure nceda ukhangele "SPAM" okanye "Nkcazelo" isiqulathi-zifayili. Ukuba ufuna nathi ukuyicima ifayili yephepha-mvume kuwe nceda wenze nathi siyazi.
WinToFlash Lite edition yi free kuba non-commercial (ekhaya okanye zemfundo iziko) sebenzisa. Ukuba ufuna ezongezelelweyo imisebenzi kuthenga Elinolwazi yephepha-mvume. Kuba sebenzisa kuba Ishishini kuthenga WinToFlash Ishishini yephepha-mvume.
WinToFlash iyafumaneka "NJENGOKUBA zinjalo". Akukho isigunyaziso salo naluphi na uhlobo ngu isitsho okanye naziphina iziqinisekiso eziqukiweyo. Usebenzisa e eyakho umngcipheko. Novicorp ayisayi kuba netyala kuba data ilahleko, umonakalo othe, ilahleko ye profits okanye naliphi na uhlobo ilahleko xa usebenzisa okanye misusing le software.
Imizekelo kwaye usebenzisa WinToFlash signifies ukwamkelwa ezi imimiselo nemiqathango yephepha-mvume.
Fumana epheleleyo umbhalo EULA (En-US)